IKALAMAVONY Omena tohana ny vehivavy, ho avy tsy ho ela ny jiro
Betsaka ireo vehivavy sy renim-pianakaviana mila fanampiana any amin’ny distrikan’Ikalamavony.
Miparitaka anefa izy ireny fa tsy mivondrona anaty fikambanana, antony nanentanan-dRtoa Raharimampionona, solombavambahoaka voafidy any an-toerana azy ireo mba hivondrona anaty fikambanana hahafahana manampy azy ireny. Anisan’ireny ny fanomezana fiofanana, ny fitadiavana famatsiam-bola hahafahan’izy ireny mivelatra hanatsarany ny fidiram-bolany ao an-tokantranony. Fantatra izany nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny vehivavy izay natao tany an-toerana afak’omaly alahady. Famohamandry no nisantarana izany ka nozaraina lambahoany miisa 3.000 ireo mpandray anjara mba hosalorany amin’ny fotoana mahamety azy. Hisy moa ny hetsika izay kasaina hatao any an-toerana ny faran'ny volana jolay ho avy izao izay hampitondraina ny anarana hoe : SAOBOKATSA entina manandratra sy mamerina ny hasin'ny disitrikan'Ikalamavony eo amin'ny lafiny kolontsaina, toekarena, fanatanjahantena ary ara-barotra. Mandritra ny 5 andro no heverina fa hanatanterahana izany dia ny 28 jolay ka hatramin’ny 2 aogositra ho avy izao. Mikasika ny jiro manazava ny tanàna izay mampitaraina ny mponina moa dia fantatra fa efa niresaka tamin’ny JIRAMA sy ny minisitry ny angovo ity solombavambahoaka ity ary ho avy hidina ifotony ireto farany hijery ny zava-misy.